Ọ dịbeghị nká ị ga -achọ nne gị: njem CHD m - Global ARCH
Global ARCH / Uncategorized / Old naghị aka nka ịchọ nne gị: njem CHD m
Old naghị aka nka ịchọ nne gị: njem CHD m
a Congenital Izu Izu Mara Obi (Febụwarị 7-14) Ana m “eme mmemme” site na akwa m n’obodo Hospitallọ ọgwụ dị na Toronto. Anọla m ebe a ọtụtụ oge n'ime ọnwa 11 gara aga, ebe ọ bụ na tupu anyị enwee mkpọchi mbụ COVID-19. Obi m, akpọrọ tetralogy nke Fallot, malitere ime ka obi m tie ngwa ngwa nke na ọ dị m ka enwere m obere nnụnụ na-atụ ụjọ, dị ka finch, tọrọ n'ime obi m. Ọ naghị afụ ụfụ, ma ọ na-eme ka ndụ sie ike na ike ọgwụgwụ, ọ dịkwa ize ndụ ma ọ bụrụ na a naghị agwọ ya. Mgbe obi m na-alaghachi n'ụda, ma n'onwe ya, ma ọ bụ site na ịwụ akpata oyi n'ahụ, ma ọ bụ na-aṅụ ọgwụ, ihe niile dị jụụ na mberede. M ga-emetụ m aka ma ọ bụ ihe dị m gburugburu ka m mara na m ka nọ ebe a. O yikarịrị ka ọ bụ ọnya anụ ahụ sitere na ịwa ahụ mepere emepe nke m megoro n'oge gara aga. Ihe na-eme ka ụlọ ọgwụ a nọrọ bụrụ ihe ịma aka enweghị ihe jikọrọ ya na COVID, ma ọ bụ eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla na-ekpuchi mkpuchi na enweghị ndị ọbịa. Ọ bụ n'ihi na nne m - nnukwu onye na-akwado m na onye na-akwado m - nwụrụ ụbọchị 3 gara aga, nke ka ukwuu site na ịka nká. Ọ nọnyeere m na njem ọrịa obi m nke afọ 58 niile, n'agbanyeghị na m gwara ya ka ọ kwụsị ịga oge mụ na ya na-aga mgbe m dị ihe dị ka afọ iri na ise. nọnyere m na nlekọta ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ, na ihe dị ka ọnụ ụlọ 15 na-echere n'ụzọ, ọ dịghị mgbe ọ bụla na-eme mkpesa ma ọ bụ na-eme ihe ike gwụrụ ma ọ bụ enweghị ndidi - n'agbanyeghị na ejiri m n'aka na ọ nọ. Ọ na-agba m ume mgbe niile ka m na-ekwuchitere onwe m n’agbanyeghị na m na-eme ihere, achọghịkwa m ime ya. Mgbe nhọpụta na usoro na Ọrịa Hospitalmụaka Ọrịa ma ọ bụ na dọkịta na-ahụ maka ọrịa ụmụaka anyị ga-enweta sandwiches cheese, Honeydew, ma ọ bụ sandwiches ice cream si igwe na-ere ahịa n'ụlọ ọgwụ. Ọ kpọghị m “onyeagha” ma ọ bụ kpata ọgba aghara. Ọ dị jụụ ma na-akwado ya mgbe niile, ma nye m, ọpụpụ anyị na-adịkarị ka njem. O mere ya otu ahụ n'agbanyeghị na o nwere ụmụ 3 ọzọ ịla. Amaghị m otú o si mee ya.
Ọtụtụ afọ gara aga ka ọ na-akwaga n'ụlọ anyị hụrụ akwụkwọ akụkọ ochie ya, bụ́ ebe o debere ihe na-eme ná ndụ ya. Achọtara m nke ahụ sitere na 1961 wee maliteghachi na Septemba mgbe ọ ga-ebu ụzọ mụọ m. Ọtụtụ n'ime ndenye ndị a bụ ndị nkịtị - bulie John site na omume band, nhọpụta ntutu - ihe ndị dị otú ahụ. Mana n'otu ibe o kwuru "Had shrimp mmanya". "Gịnị mere i ji dee ya?" Ajụrụ m. O kwuru na ya ga-etolite nnukwu hives mgbe o richara oporo, dọkịta ya nyere ya prednisone. Nke ahụ nwere ike ma ọ bụ enweghị ihe jikọrọ ya na ntụpọ obi m - anyị agaghị ama.
Otu ụbọchị tupu ọ nwụọ, anyị na-ekwu okwu na ekwentị, m si n'àkwà ụlọ ọgwụ m na ya site na oche na-eri nri n'ụlọ ya na US Ahụbeghị m ya otu afọ na ọkara, nchikota nsogbu ahụike m na Covid . O kwuru "O wutere m na ị nwere ọtụtụ nsogbu n'obi gị", m wee sị "Ọ dị mma mama ma ọ bụrụ na ịnweghị mmanya mmanya ahụ!", M chịrị ọchị, n'ihi na ọ dịghị mkpa, na n'ọtụtụ ọnọdụ enweghị ihe kpatara ụfọdụ n'ime anyị ji ata ahụhụ karịa ndị ọzọ n'ọtụtụ nde ụzọ dị iche iche. Na ọtụtụ n’ime anyị nwere akụkụ ahụ anyị n’ụzọ ziri ezi bụ ọrụ ebube n’onwe ya. Ọ malitere ịchị ọchị n'ụzọ ahụ o mere mgbe ọ chere na ihe na-atọ ọchị, na-ehichapụ anya ọchị ya n'akụkụ aka ya. Kinddị ochi anyị nwere mmasị ịnụ, n'ihi na ọ dị nro ma ọchị ya na-efe efe. Ma mgbe ahụ ọ sịrị na ọ ga-aga ụlọ mposi niile na-achị ọchị ma ya mere anyị kwuru sị, m ga-akpọ gị echi. Ma nke ahụ bụ ihe ikpeazụ anyị kwuru.
O mere ka m chee echiche banyere otú ụmụaka nwere nkwarụ obi, ọ bụrụ na ha nwere ohere nlekọta dị mma, ga-esi na-etolite n'ọtụtụ akụkụ ka ha bụrụ ndị okenye ọrịa obi. Ha ga-adị mkpa ka ha dị ike na ndị na-agbanwe agbanwe, na ịmụta ịkwado onwe ha. N'ezie ọ bụghị ụmụaka niile ma ọ bụ ndị okenye ga-enwe ike; ụfọdụ ga-achọ nlekọta pụrụ iche n’ihi nsogbu ahụ́ ike ha. N'akụkụ ụfọdụ nke ụwa, dị ka na Canada ebe m bi, ugbu a enwere ọtụtụ ndị toro eto na-arịa ọrịa obi, na ọtụtụ n'ime anyị ga-ebirịrị, n'oge ụfọdụ, na-enweghị nne na nna anyị. Anyị ga-agbasi ike n'onwe anyị n'ihi na ọrịa obi a mụrụ siri ike - ọ bụghị ikpe ndụ, mana ọ bụ njem ndụ. Ma ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị anaghị ahụ onwe anyị dị ka ndị dike, ma ọ bụ na-achọ ka a kpọọ ya, anyị bụ ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ chọghị.
Anyị ga-amasị ịnụ gị. Ọ bụrụ n’inwere ihe ịchọrọ ịkọrọ gbasara ndụ gị ma ọ bụ rụọ ọrụ na CHD / RHD biko zitere anyị ozi info@global-arch.org (Okwu 1000 kachasị karịa).